अद्भुत खगोलीय घटना जसमा ८ वटा सूर्यको ऊर्जा एकैचोटि निस्कियो
मगलवार, आश्विन १३, २०७७ ०९:२०:१९ Tuesday, 29 September, 2020
एजेन्सी । आठ वटा सूर्यबाट एकैचोटि कति ऊर्जा निस्किएला ? अनुमान गर्नुहोस् त ! सात अर्ब वर्षअघि ब्रह्माण्डमा २ वटा ब्ल्याक होल (अर्थात् कृष्णगर्त) को विलय हुँदा गुरुत्वीय तरङ्ग फैलियो।
त्यो घटनालाई अहिलेसम्म थाहा पाइएको ब्ल्याक होलहरूको सर्वाधिक ठूलो विलय मानिएको छ।
ती दुई ब्ल्याक होल एकीकृत भएपछि त्यसको पिण्डमान १४२ वटा सूर्यको जति भएको थियो। यो उल्लेखनीय कुरा हो। विज्ञानले लामो समयदेखि आकाशमा ब्ल्याक होलको अस्तित्व पत्ता लगाउँदै आएको छ। तीमध्ये कुनै साना र कुनै धेरै ठूला छन्।
गुरुत्वीय तरङ्ग पत्ता लगाउन अमेरिका र युरोपमा जडित तीन वटा प्रणालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य लिगो-भर्गोले यस विषयको अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ।
ब्ल्याक होल के हो ?
कम्प्युटर एल्गोरिदमहरूले त्यो सङ्केत एकअर्कालाई फन्को मार्दै गरेका २ वटा ब्ल्याक होलको अन्तिम अवस्थामा उत्पन्न भएको निर्क्योल गरे। ती मध्ये एउटा ब्ल्याक होलको पिण्डमान सूर्यको भन्दा ६६ गुना र अर्कोको ८५ गुना भएको मानिएको छ।
अहिले गणना गर्दा ती दुई ब्ल्याक होल एक अर्कामा विलय भएको दूरी १५०,०००,०००,००० खर्ब किलोमिटर निस्किएको छ। "यो वास्तवमै अद्भुत छ," फ्रान्सस्थित कोट डाज्युर वेधशालाका प्राध्यापक नेल्सन क्रिस्टेन्सनले भने।
"यो सङ्केत ७ अर्ब वर्ष प्रशारित भयो। यो घटना ब्रह्माण्डको 'ठिक मध्यान्तरअघि' भयो। अनि त्यसले अहिले पृथ्वीमा हाम्रा उपकरणलाई हल्लाइदियो," उनले भने।
LIGO-VIRGO COLLABORATION युरोपियन भर्गो लेजर प्रयोगशाला इटलीको पिसामा छ
ती तरङ्ग पत्ता लागेपछि ब्रह्माण्ड बारे नितान्त नयाँ अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ
पचासी वटा सूर्यको जति पिण्डमान भएको खगोलीय वस्तु ठोकिएको घटनाले वैज्ञानिकहरूलाई अहोरात्र काम गर्न बाध्य बनायो किनभने ताराको मृत्यु भएपछि ब्ल्याक होल निर्माण हुने उनीहरूको ज्ञान यो विषयसँग मेल खाँदैनथ्यो।
आफ्नो नाभिकीय ऊर्जा सकिएपछि ताराहरूको केन्द्रीय भाग विस्फोटन हुँदै विलीन हुन्छ। अनि यदि ती ताराको आकार ठूलो छ भने त्यसबाट ब्ल्याक होल बन्छ।
तर ती तारालाई नियमन नगर्ने भौतिकीका नियमका कारण ६५ देखि १२० सोलर मास अर्थात् सौर्य पिण्डमान भएका ब्ल्याक होल बन्न असम्भव भन्ठानिन्छ। मृतोन्मुख ताराहरूले त्यस्तै केही उत्पन्न गराउन सक्छन् तर ती आफैँ छिन्नभिन्न भएर केही बाँकी रहँदैन।
यो बिन्दुमा यदि विज्ञान सही छ भने ८५ सौर्य पिण्डमान भएको वस्तुको अस्तित्व सम्बन्धी व्याख्या ब्ल्याक होलहरूको अझ पुरानो विलयबाट यसको निर्माण भएको हो भन्ने मान्यताले गर्न सक्छ।
यूकेस्थित ग्लास्गाे यूनिभर्सिटीका प्राध्यापक मार्टिन हेन्ड्री त्यसले ब्रह्माण्डको अभ्युदयको प्रमाण दिने धारणा राख्छन्।
"हामी यहाँ विलयहरूको पदानुक्रम बारे कुरा गर्दैछौँ, त्यस्ता विलयहरू ठूलाठूला ब्ल्याक होल निर्माण हुने सम्भावित मार्ग हुन्," उनले भने। "यो १४१ सौर्य पिण्डमान भएको ब्ल्याक होलको अरू ठूला ठूला ब्ल्याक होलहरूसँग विलय भएको थियो कि ! कसलाई थाहा छ र?"
LIGO-VIRGO अहिलेको आविष्कारले ठूला ब्ल्याक होलहरू बन्न विलयको पनि पदानुक्रम भएको सङ्केत गरेको छ
लिगो-भर्गो सहकार्यले GW190521 नाम दिइएको गत वर्षको घटना बारे दुई वटा वैज्ञानिक शोधपत्र तयार पारेको छ।
"हामी डिकेक्टरहरूको संवेदनशीलता बढाइरहेका छौँ। अनि हामी एकै दिनमा एउटाभन्दा बढी पत्ता लगाउन सक्छौँ। हामीसँग ब्ल्याक होलहरूको वर्षा हुनेछ!" माक्स प्लान्क इन्स्टिट्यूट फोर ग्र्याभिटेशनल फिजिक्सका निर्देशक प्रा. आलेस्सान्द्रो बुओनान्नोले भने।
ती फरक मार्गहरू ड्याम्प्ड मिररु भनिने विशेष ऐनाहरूका बीच एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्छन्
NSF/VIRGO लेजर प्रयोगशालाको संवेदनशीलता बढाउने काम निरन्तर भइरहेको छ
खानी उत्खनन् तथा खोजतलास अनुमति
खल्ती डिजिटल वालेटमार्फतै बैंक ऋण आवेदन
लक्की ड्र मार्फत २ भाग्यशाली विजेता छनौट "डिसहोम मा डिलर दाईको डिस्काउण्ट" योजनाका विजेयताले पाए नगद १/१ लाख
आइतवार, असार २८, २०७७ News Missile
हरेक हप्ता २ जना भाग्यशाली विजेता छनौट हुने भाग्यशाली विजेताले नगद २ लाख जित्ने
शुक्रवार, असार २६, २०७७ News Missile